Man City Oo Guul Soo Laabasho Ah Ku Dishay Chelsea, Rekoodhkii Martida Ee Lampard Oo La Soo Gaba Gabeeyay Iyo Liverpool Oo Wali Faa'iido Kale Heshay. - Gool24.Net
Man City Oo Guul Soo Laabasho Ah Ku Dishay Chelsea, Rekoodhkii Martida Ee Lampard Oo La Soo Gaba Gabeeyay Iyo Liverpool Oo Wali Faa’iido Kale Heshay.
November 23, 2019 Mahamoud Batalaale
Manchester City ayaa Etihad Stadium ku dubatay Chelsea oo gool kaga hor martay waxayna kooxda Gaurdiola si xoogan uga falcelisay gool uu Kante xili hore u dhaliyay Chelsea oo fursad fiican iska halaysay.
Riyad Mahrez iyo Kevin De Bruyne ayaa soo gaba gabeeyay rekoodhkii fiicnaa ee kulamada martida ee ay Chelsea ku soo jirtay.
Man City ayaa guul 2-1 ah ka gaadhay Chelsea si ay uga soo kabsato guuldaradii Liverpool ka soo gaadhay kulankii ugu danbeeyay ee Premier league. Man City ayaa kaalinta saddexaad soo gashay halka Chelsea ay kaalinta afraad iskaga riixday.
Kaydka: Andreas Christensen, Olivier Giroud, Reece James, Michy Batshuayi, Pedro, Mason Mount, Willy Caballero
Kaydka: Angelino, Kyle Walker, Gabriel Jesus, Nicolas Otamendi, Phil Foden, Claudio Bravo, Ilkay Gundogan
Daqiiqadii 21 aad Chelsea ayaa goolka furitaanka ciyaarta ku hor martay kadib markii uu N’Golo Kante gool qurux badan ku dhaliyay kubbad caawin uu ka helay M. Kovačić, wuxuuna goolkani noqday mid aamusnaan ku jiray Etihad Stadium.
Kanta ayaa muujiyay awooda uu ku leeyahay in uu weerar qaadi karo isla markaana uu goolal qurux badan dhalin karo wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1-0 ay Blues oo marti ahi hogaanka kula wareegtay.
Laakiin Manchester City ayaa jawaab adag ka bixisay goolka loogaga hor maray garoonkooda Etihad Stadium waxayna Chelsea awoodi kari wayday in ay sii xejisato hogaanka ciyaarta.
Daqiiqadii 29 aad xidiga xili ciyaareedkan ugu fiican Premier Leauge ee Kevin De Bruyne ayaa Manchester City ciyaarta dib ugu soo celiyay kadib markii uu dhawr xidig oo Blues u diiday in ay shaqo fiican qabtaan.
De Bruyne oo xili ciyaareedkan loo arko kan ugu saamaynta badan ilaa hadda kulamadii la soo ciyaaray ayaa ciyaarta ka dhigay barbaro 1-1 ah waxayna City bilawday in ay culayska sii saarto Chelsea.
Daqiiqadii 37 aad Alla muxuu gool ahaa!! Rihad Marez ayaa gool qurux badan kaga farxiyay Etihad Stadium wuxuuna gabi ahaanba dhinaca kale u dhigay natiijadii ciyaarta ee ay Chelsea goolka ku hormartay isaga oo si qurux badan u dhamaystiray kubbad caawin uu ka helay Rodri Hernández.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 2-1 ay Man City hogaanka ku haysay inkasta oo ay Chelsea ahayd kooxdii goolka ku hor martay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta ayuu Lampard isbadal shaxdiisa ku sameeyay isaga oo garoonka soo galiyay James wuxuuna saaray Emerson taas oo keentay in Azpilicueta uu difaaca bidix u guuray.
Guardiola ayaa isna daqiiqadii 67 aad ciyaarta soo galiyay da’yarka saamaynta badan ee Phil Foden wuxuuna saaray David Silva oo hadda u muuqda in aanu kulamada dhamaysanayn.
Daqiiqadii 73 aad Lampard ayaa ciyaarta soo galiyay M. Batshuayi wuxuuna saaray T. Abraham oo aan kulankan saamayntii uu lahaa yeelan wuxuuna sidoo kale keenay Mason Mount isaga oo saaray Joringho.
Laakiin Guardiola ayaa kaga jawaabay in uu Sergio Aguero saaray isla markaana uu Gabriel Jesus weerarkiisa ku soo xoojiyay waxaana la galay tobankii daqiiqo ee ciyaarta ugu danbeeyay.
Daqiiqadii 80 aad Willian ayaa ugu dhawaaday inuu Chelsea ciyaarta ku soo celiyo laakiin darbo uu xidiga reer Brazil tuuray waxaa u jawaabay goolhayaha ay isku qaranka yihiin ee Ederson oo Man City goolkan ka joojiyay inkasta oo garsooruhu aanu Blues koorne siin.
Chelsea ayaa raadinaysay sidii ay ciyaarta uga heli lahayd hal dhibic halka Man City ay wax walba u samaynaysay in ay ciyaarta ku disho goolka saddexaad waxaana laysla soo gaadhay dhamaadkii ciyaarta.
Daqiiqadii 93 aad Manchester City ayaa ugu danbayn si rasmi ah ugu qaadatay in ay ciyaarta ugu dishay goolka saddexaad kadib markii uu Raheem Sterling dhaliyay wax loo arkayay goolka saddexaad ee City laakiin goolkan ayaa markiii danbe la diiday.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2-1 ay Man City ku dubatay Chelsea oo waliba gool ku hor martay waxayna City ka soo kabsatay guuldaradii Liverpool ka soo gaadhay ka hor kulamadii caalamiga ahaa laakiin waxay Liverpool lafteedu kulankan ka heshay in ay Chelsea ka sii fogaatay.